Sidee ayay daruuraha cirrus u samaysan yihiin maxayse saadaalinayaan? | Saadaasha Shabakadda
Sidee ayay daruuraha cirrus u samaysan yihiin maxayse saadaalinayaan?
Waxaa jira noocyo badan oo daruuro cirka ah, laakiin maanta waxaan kahadleynaa mid caan ka ah cirka: daruuraha cirrus.
Ma rabtaa inaad ogaato sababta ay u soo muuqdaan iyo goorta ay tilmaamayaan?
1 U muuqashada daruur cirrus ah
2 Cirrus iyo isbedelka cimilada
U muuqashada daruur cirrus ah
Wareegtada ama cirrigu waa nooc daruur ah oo ka kooban kristantarro baraf ah, maadaama ay ku samaysan yihiin dherer qiyaastii ah 8.000 oo mitir. Waxaa lagu gartaa iyadoo leh dhuumooyin dhuuban oo khafiif ah waxayna u egyihiin cirfiid dhamaadka. Mararka qaar hal daruur cirruur ah ayaa lagu daro mid kale waxayna u muuqataa mid aad u dheer oo qofku uusan kala garan karin midka kale kan kale. Markay tani dhacdo, waxaa loo yaqaan 'cirrostratus'.
Magaca cirrus wuxuu ka yimid Latin cirrus y macnaheedu waa curl. Sidaa awgeed, waxaa loola jeedaa qaabka daruurta.
Daruuraha Cirrus waxay muujinayaan faraqa u dhexeeya dhaqdhaqaaqa hawada inta u dhexeysa kore iyo hoose ee daruurta. Maaddaama jihada dabayshu is beddeli karto, xuduudaha wareegga ayaa si dhakhso leh uga gudbi kara lakabka hawada waxayna u kala jabi karaan lakab hawleed hoose oo dhakhso leh.
Waxay badanaa ka muuqdaan dhererka u dhexeeya 8 iyo 12 km. Kiristaalo baraf ah oo dhaca marka daruurtu kala go'do waxay uumi baxaan intaanay dhulka ku dhicin.
Inay jiraan cirrus cirka waxay muujin kartaa inuu jiro nidaam hore ama carqaladeynta lakabyada sare. Waxay kaloo tilmaami karaan inay duufaan soo socoto. Caadi ahaan, lakabyada waaweyn ee daruuraha cirroodka ayaa ah kuwa la socda qulqulka hawada sare.
Cirrus iyo isbedelka cimilada
Cirrus wuxuu ku shaqeeyaa adoo ku xiraya kuleylka ay soo saartay dhulka dib ugu soo laabashada meesha lagu jiro saameynta aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin sidoo kale waxay ka caawineysaa inay ka tarjumaan iftiinka qoraxda inuu gaaro dusha sare. Si fiican looma oga sida ay si cad ugu saameyso isku dheelitirka tamarta ee Dunida, laakiin waxaa lagu yaqaan inay gacan ka geystaan ​​albedo-ka dhulka.
Dhinacani waa muhiim in la tixgeliyo marka la saadaalinayo isbeddelka cimilada.
Horey wax kale ayaad uga ogtahay daruuraha cirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Sidee ayay daruuraha cirrus u samaysan yihiin maxayse saadaalinayaan?
Isbedelka cimiladu wuxuu kordhin karaa abaaraha ku jira jiinka Júcar